ungayivula kanjani i-iphone ngewashi le-apula ukugcina imaski yobuso bakho ivuliwe
none Izindaba Nokubuyekezwa Ungayivula kanjani i-iPhone ene-Apple Watch egcina imask yakho yobuso ivuliwe
Ungayivula kanjani i-iPhone ene-Apple Watch egcina imask yakho yobuso ivuliwe
I-Apple isanda kuphuma isibuyekezo se-iOS 14.5 emphakathini jikelele, futhi lena inguqulo ecebe kakhulu ye-iOS 14 kuze kube manje ngokwemisebenzi engezwe ku-iPhone yakho. Phakathi kwezici ezintsha eziphezulu ze-iOS 14.5 mhlawumbe ukuhlanganiswa okuqinile ne-Apple Watch, okukhishwe i-watchOS 7.4 yayo.
Kungani i-Apple izokwethula ukuxhumana okujulile nokugqokwa kwayo, noma kunjalo? Yebo, ngoba awukwazi & apos; t vula i-iPhone yakho ngesifihla-buso manje, yingakho & apos; yingakho. Siyingane, kodwa ikhono lokuvula i-iPhone yakho nge-Apple Watch yakho esikhundleni sesimiso esesabekayo se-mask-averse Face ID, esibizwa nje nge-Apple Watch Unlock, lizoba yingxenye ebalulekile yokuvuselelwa kwe-iOS 14.5. Uchungechunge lwe-Apple 6 (40mm) Buka intengo Thenga e-Amazon $ 34999 $ 39999 Thenga ku-Target $ 379 $ 399 Thenga kwaBestBuy $ 379 $ 399 Thenga ku-B & H Photo $ 330 $ 399 Iphelelwe yisikhathi Buka intengo Thenga e-Amazon $ 449 $ 499 Iphelelwe yisikhathi $ 479 $ 499 Thenga kwaBestBuy $ 49999 Thenga ku-AT & T $ 49999 Thenga kwaVerizon
Ungasisebenzisa kanjani isici se-Apple Watch iPhone Unlock ku-iOS 14.5 nakuzibuyekezo ze-watchOS 7.4
Iya kuzilungiselelo> I-ID yobuso nekhodi yokudlula.
Gqoka i-Apple Watch yakho ngewatchOS 7.4 nokutholwa kwesihlakala kuvuliwe.
Yenza i-Apple Watch yakho ivulwe futhi inikwe amandla ikhodi yokudlula.
Vumela i-Face ID ibone ukuthi ugqoke imaski.
I-Apple Watch izodlidliza, ikwazise ukuthi iqinisekise ukuvula i-iPhone.
Gcina imaski yakho ivuliwe.
Akunakusho ukuthi, lokhu kubukeka njengesixazululo se-stopgap sokuvula i-iPhone kuze kube yilapho i-Apple yethula ifayela le- 2021 I-iPhone 12S / 13 nge Iskena seminwe ye-Touch ID esingaphansi kwesibonisi . Ngokwemvelo, i-Apple ayizange ihlelele ubhadane lwe-COVID, ishiye abasebenzisi abafihliwe bezindlela ze-biometric kuphela ukuvula i-iPhone yabo ngokubopha.
Isici se-Apple Watch Unlock sizosebenzela ukuvula kuphela, futhi, singagunyazi ukuthenga kwe-Apple Pay, imininingwane yekhadi lesikweletu ku-Safari, noma yiziphi izinto ezibucayi ezinjalo. Sawubona, kufana ne-Unlock Apple Watch lapho uvula isici sakho se-iPhone, kepha emuva, kufana nokuvula i-Mac yakho nge-Apple Watch ... kepha uvule imaski. Ngayiphi indlela noma kanjani noma ngayiphi indlelaMore (Definitions, Synonyms, Translation)
gizmowatch vs gizmo iwashi 2
amadili samsung galaxy s7 black ngolwesihlanu
Isibuyekezo esisebenzayo se-Samsung Galaxy Watch
Idili le-AT & T BOGO lifaka i-Apple iPhone 7, LG G5 ne-Samsung Galaxy S7
Ukubuyekezwa kwe-Amazon Echo Dot (Isizukulwane Sesithathu)
IVerizon empeleni ithatha ikhasi kusuka ku-T-Mobile & apos; ibhuku lokudlala elidala ngephromo entsha eshisayo ye-5G
Idethi yokukhishwa kwe-Apple AirPods Pro 2, intengo, izici nezindaba
Imiphumela yokuhlolwa kwempilo yebhethri ye-Apple AirPods: ihlala isikhathi esingakanani?
I-Samsung Galaxy Note 8 ingakhishwa ngokushesha okukhulu kunokulindelekile (e-US)
Ungakuxhumanisa kanjani ukulala kwakho njengedatha ye-Android ne-Google Fit noma izinhlelo zokusebenza ze-Samsung S Health
Ukubuyekezwa kwamahemuhemu we-Samsung Galaxy S7 ne-S7 Edge: ama-specs, izici, intengo nosuku lokukhishwa
Idili: I-32GB Space Grey iPhone 6 ingama- $ 200 nje ngaphandle kwenkontileka eVirgin Mobile